ध्यान सुविधाहरू वाचओस F फिटनेस + मा लीक भयो म म्याकबाट हुँ
ध्यान सुविधाहरू वाचओस F फिटनेस + मा लीक भयो
ध्यान धेरै व्यक्तिहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ र तिनीहरू यसलाई विभिन्न कारणका लागि अभ्यास गर्छन्, अब एप्पलले आधिकारिक रूपमा सुरू गर्न नचाहेको हो भिडियो जुन प्रयोगकर्ताहरूका लागि नयाँ विकल्प देखाउँदै थियो एप्पल स्वास्थ्य +, अडियो ध्यान। एक घण्टा भन्दा बढीको यो भिडियो सत्रहरू हो जुन यस वर्षको डब्ल्यूडब्ल्यूडीसीमा आयोजना हुँदैछन् र विकासकर्ताहरूमा केन्द्रित छन्, शीर्षक राखिएको छ, संघको राज्य.
यो प्रकार्य गल्तिले फुटेको थियो र वर्तमानमा सेवामा उपलब्ध छैन तर एप्पल वाच अपरेटिंग प्रणालीको नयाँ संस्करणको साथ आउने आशा गरिन्छ, watchOS 8। धेरै मिडियाले समाचार प्रतिध्वनि गरे र यस्तो लाग्छ कि अन्ततः यो प्रकार्य अपरेटिंग सिस्टममा पुग्नेछ।
यी प्रकार्यहरूको नकारात्मक पक्ष जुन प्रयोगकर्ताहरूले फिटनेस + मा पहुँच गर्दैन यसलाई प्रयोग गर्न सक्नेछैनन्, कम्तिमा यस्तो देखिन्छ कि। अवश्य सास फेर्न, ध्यान र Mindfulness को पक्ष मा एप्पल काममा कडा छ र यी सुविधाहरूले धेरै प्रयोगकर्तालाई मद्दत गर्दछ जस्तो देखिन्छ, त्यसैले तिनीहरूलाई बढावा दिन सँधै राम्रो छ।
एप्पल वाचमा हामीसँग लामो समयसम्म उपलब्ध समारोह वा सास फेर्ने अनुप्रयोग वास्तवमै उपयोगी छ र यदि उनीहरूले यसलाई अझ बढी विकल्पहरूको साथ पनि सुधार गरे भने उत्तम। थोरै वा बरु दुर्लभ हो एप्पल वाचको नयाँ अपरेटिंग प्रणालीमा थपिएका समाचारहरू त्यसोभए यी सबै समाचारहरू, ती दोस्रो रूपमा भए पनि, प्रयोगकर्ताहरूका लागि राम्रो हुन निश्चित छन्। यो चाखलाग्दो हुनेछ यदि एप्पलले अधिक देशहरूमा फिटनेस + लाईन्च गर्दछ, के तपाईलाई लाग्दैन?
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल उत्पादनहरू » Apple Watch » ध्यान सुविधाहरू वाचओस F फिटनेस + मा लीक भयो
म्याकमा एयरप्लेले म्याकमा सामग्री साझेदारी गर्न अनुमति दिन्छ